Accueil > Gazetin'ny nosy > Claudine Razaimamonjy : Hitory ka hangataka onitra amin’ny fanjakana ?
Claudine Razaimamonjy : Hitory ka hangataka onitra amin’ny fanjakana ?
Nivoaka omaly ny didim-pitsarana ady heloka nahavoarohirohy an-dRtoa Razaimamonjy Claudine, ka nohafahan’ny fitsarana madiodio tamin’ny fanenjehana azy izy. Raha tsiahivina dia heloka momba ny fanodinkodinam-bola tamin’ny fanam-boarana fotodrafitrasam-panjakana tany Ambalavao Matsiatra Ambony no nahavoarohirohy azy. 396 tapitrisa ariary ny sandan’ny asa nifanarahany tamin’ny fanjakana fa hoe iantohany, saingy nisy ny hoe “baiko avy amin’Ingahy Praiminisitra Solonandrasana Olivier, tamin’ny naha-minisitra ny Atitany azy, nivantana tamin’ny ben’ny tanànan’
Ambohimahamasina, satria tao no tokony nanaovana ny asa”. Nobaikoina sy nohorohoroina io ben’ny tanàna io hamoaka an’ilay vola tokony hanaovana ny asa, satria hoe “fanampiana manokana avy amin’ny fanjakana” (Subvention exceptionelle) io, ka tsy maintsy avoakan’Ingahy Ben’ny tanàna ho an’ny mpibaiko sy ny mpiantoka asa.
Nihodinkodina teny ny raharaha, saingy rehefa nalazo ny ravina niaraha-nihinana teo amin-dRtoa Razaimamonjy Claudine sy ny vadin’ny filohampirenena RajaonarimampianinaVoahangy, dia nizaka ny taolam-be tsy nitapaka Rtoa Razaimamonjy, ka voatana am-ponja niandry ny fitsarana azy. Nahabe resaka teto amin’ny tany sy ny fanjakana izany satria nisy hatramin’ny nadefasana azy notsaboina tatsy amin’ny Nosy Maorisy, satria hoe torana raha vao nandre fa hotanana am-ponja.
Amin’izao fotoana, satria azo ambara ho voahosihosy ny haja amam-boninahiny rehefa hitan’ny fitsarana fototra fa tsy mitombnina ny fanenjehana azy araka ny lalàna velona. Rehefa nahazo an’io fahafahana madiodio avy amin’ny fitsarana io izany Rezaimamonjy Claudine dia re fa hitory ny fanjakana izay karazan’ny nanendrikendrika azy izy, ary tonga amin’ilay fitenenana hoe “nororain-tsy maimbo”, ka dia hangataka onitra noho izany fahavoazana nihatra taminy izany. Eo ny nitanana amponja azy nandritra ny herin-taona mahery fa eo koa ny haja amam-boninahiny izay voahosihosy tsy fidiny.
Tonga amin’ilay fitenenana hoe “namono biby tsy nahafaty izany ny Bianco sy ny “Chaine pénale anti-corruption” ary fanjakana ka izao hifoteran’ny rambony izao”.
Fa etsy ankilany, maro ny ady hevitra niseho lany tany anivon’ny “salon” rehetra tany alina ka isan’ny voaresaka ny momba ity raharaha Razaimamonjy Claudine ity. Re fa isan’ny teboka niteraka ny ady mangatsiaka teo amin’ny samy manodidina an dRajaonarimampianina Hery mivady ity raharaha ity. Lasa fisainana àry ny olona sasany hoe “sanatria ve, noho ny fiakaran-dRakotovao Rivo ho filoham-panjakana mpisolo toerana vonjimaika izao no nahatonga izao fahazoan-dRazaimamonjy Claudine fahafahana madiodio izao? Isan’ny olona akaiky an-dRazaimamonjy Claudine mantsy ry Rivo Rakotovao, ary nanana ny toerany tao anelanelan’izany ny minisitra Rina Andriamandavy, izay zaodahin-dRazaimamonjy Claudine, ka rehefa tsy manana fahefana eo ampelan-tanany intsony ny filoha Rajaonarimampianina Hery izay nireharehan-dRtoa Rajaonarimampianina Voahangy, dia io fa tafita ny fanirian’ireo nanohitra ny fisamborana sy fanagadrana an-dRazaimamonjy Claudine. Misy koa anefa ny manombantombana fa “mety hisy fifandraisany amin’izao raharaham-pifidianana ho avy izao ny didim-pitsarana nanafahana madiodio an-dRazaimamonjy Claudine, ary olona manam-pahefana ambony izay manana kandida tohanana amin’izao fifidianana izao no tompon’ny tsindry, ka isan’ny fepetra ny hoe “hanohan-dRazaimamonjy Claudine an’io kandida io”.
Dia miara-manara-maso ny tohiny isika e !
Fampivoarana ny fanatajahan-tena : Aleo hijanona ho an’ny tanora ny kianja
Ben’ny tanànan’Antananarivo : Tsy mbola manana kandida ny IRD-MAPAR
Depiote : Mifampihatsara ivelan-tsihy
Antenimierampirenena : Nalain’ny IRD daholo ny toeran’ny filoha lefitra enina
Governemanta Ntsay : Matahotra ny sezany ny maro amin’ireo minisitra
Fanoherana ny fitondrana : Tsy mitovy hevitra ireo milaza ho mpanohitra
Véronique Vouland : Nanaovan’ny Malagasy angaredona
Asan-dahalo :Vizana hatramin’ny zandary tany Betroka?
Tsara ho fantatra : Minisitra 8 teo aloha no lasa depiote